Google Adwords Keyword Qalab Qorsheeyaha Bilaashka ah. Keyword Planner
Tan oo dadka ku sameynayaan baaritaan Google hada
waxay aad ka heli karto?
Raadi keywords xaq u
Bilow ku teeb gareynta in la helo keywords ugu fiican. Baro isbeddellada cusub:
Baro fursadaha kaamil ah.
Our qalab shaandhaynta iyo qorshaynta awood kuu ogolaanaya in aad in aad maskax ahaan iyo si dhakhso ah loo ogaado fursadaha keyword aad dhab xiiseynaya. Iyadoo our dhan-in-mid Qorsheeyaha keyword ma waxaad u baahan doontaa aalad kasta oo kale si ay u qabtaan cilmi-baaris dhammaystiran keyword.
Samee liis keyword iyo aad u hesho baxay dhibic ee ugu danbeysay ee ay awoodda.
Keydso oo isku ururi ereyadaada muhiimka ah liisaska si aad ugu maamuli karto wakhti kasta Qorsheeyaha Keyword Clever Ads . Waxaad awoodi doontaa inaad ka sameysatid liisas cusub xoqitaan, cusbooneysiin, oo aad ku milmaan ama aad ereyada muhiimka ah ka wareejiso liistada kale.
Raadi ee keywords saxda ah ee ganacsiga
Baro kun oo keywords cusub iyo aad u hesho natiijo sax ah by dabaqii labaad si aad diirada saartaa keywords in dhab ahaantii aad xiisaysaa. Waxaad tahay in ay gacanta ku.
Abuur liis cusub ama buuxi liiska jira
Marka aad keywords aad soo xulay, waxaad yeelan doontaa in la abuuro liiska cusub iyaga ama iyaga waxaa ka mid ah mid ka mid ah ee hadda jira. iyaga Maamul oo waxaa iyaga la ciyaaro sida aad rabto - ilaawaan Excel.
Toos ugu soo rar ereyadaada muhiimka ah ololahaaga Google Ads
Si fudud uga soo deji ereyada muhiimka ah liisaskaaga ololayaashaada Google Ads hal guji. Ku hel ereyada muhiimka ah ee kaa maqan ololahaaga adoo jaleecaya isla markaana kor u qaadaya waxqabadkaaga.
Baro keywords cusub meel kasta
Clever Ads xayeysiiska Clever Ads xayeysiiska ah waxaa si gaar ah loogu talagalay inuu ka bixiyo awooda ugu badan qalab kasta. Sidaas waad u isticmaali kartaa wakhti kasta iyo meel kasta.
tartamayaal Beat la our Chrome Extension
goobaha Browse tartame oo la ogaado oo keywords iyaga ka caawinaya jiitaan gaadiidka.
“Waxaan si gaar kordhin Chrome ay horumariyo, sidaas Waan kala dhig dhigi karaa websites la mid ah oo aad hesho fikrado ka keywords ay isticmaalaan. Waxaan sidoo kale ku raaxaysan aan kala soo bixi kartaa dhammaan macluumaadka la xiriira keywords for free si aan gaari karaan go'aanno wanaagsan iyo ka badan oo ku wargeliyay.”.
“Erayada furaha ah ee aan ka helo Qorshaha Keyword ee Google badanaa waa kuwo guud oo aan sharraxaad badan lahayn ... taasi waa sababta aan u door bidayo Qalabka Cilmi-baarista ee Kireynta Clever Ads Waxay i siinaysaa natiijooyin dhameystiran maadaama ay xog ka helayaan ilo dhowr ah, sidoo kale uma baahni inaan lahaado Google Ads ama aan iska diiwaangeliyo meel kasta.”
“Isla markii aan ku soo daray farabadan ereyada muhiimka ah ee cusub ee aan ka helay Clever Ads , waxaan arki karay kororka CTR ee Google Ads . Hadda oo aan dalbado ereyada muhiimka ah ee dhagaystayaashaydu runti raadinayaan, waxaan joojiyay lacag luminta soo jiidashada taraafikada tayada hoose leh.”
Erayada furaha u sugayaan
Tan oo qof ayaa raadinaya adeegyada iyo badeecada aad on Google. Bandhigtay keywords ee ay isticmaalayaan.
Wax badan oo ku saabsan Clever Ads Keyword Planner qalab bilaash ah
Kulan oo dhan-in-mid qalab u kacaan keyword cilmi marketers iyo xayeysiiya. Kor loogu qaado istaraatijiyad SEO aad hadda!
Features iyo faa'iidooyinka our Qorsheeyaha keyword
Qalabkan 'SEO', waxaad ku soo jiidan doontaa dadka runtii xiisaynaya ganacsigaaga (wax soo saarka ama adeegyada) adoo tilmaamaya ereyada muhiimka ah ee saxda ah ee macaamiishaadu suurtagal tahay inay dhab ahaan ku qorayaan barta baaritaanka Google. Clever Ads Keyword Xayeysiiska Xariifka ah waxaa loogu talagalay inuu ka fiicnaado tartanka adoo abuuraya keywords keywords-dabo dhaadheer ah oo ganacsigaagu ubaahan yahay ololaheeda xayeysiiska Google Ads si loogu guuleysto. Istaraatiijiyad wanaagsan oo SEO ah ayaa lagama maarmaan u ah bartaada inay si fiican u qabato, SEO-na waxba ma aha iyada oo aan la helin cilmi-baaris keyword wanaagsan. Aynu ku caawinno!
Hel natiijooyin sax ah & faa'iido u ah ganacsiga
Our keyword qalab jiilka free ku tusi doono oo dhan keywords la xiriira la xiriira raadinta iyo u oggolaadaan in aad iyaga shaandhayso by tubta advertising muhiimka ah Google. Waxaad ka heli doontaa natiijo sax ah inuu sameeyo go'aano iyo dooran keywords fulinta wanaagsan ee ololaha aad. Samaynta go'aano suuq ganacsi aan si fiican loogu wargeliyo iyo natiijada saxda ah waxay keeni kartaa waxqabadka saboolka ah iyo, sidaas awgeed, gaadhayn ujeeddooyinkeenna wakhtiga la doonayo. Iyada oo liiska keyword of our qorsheeyaha keyword ma waxaad yeelan doontaa dhibaatada iyo waxa gebi ahaanba bilaash ah!
Iska ilow wax ku saabsan xajmiga xajmiga 'Excel' iyo 'spre ads '
Waan ognahay in maaraynta iyo falanqaynta xogta dukumintiyada waaweyn ay kaa tagi karto daal iyo jahwareer, sidoo kale u baahan tahay waqti badan iyo ilo badan oo lagu maalgeliyo, iyadoo la siinayo natiijooyin liita. Ha nixin, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Waqtiyadii ay ahayd inaad soo dejiso tan oo keywords keyword ah xajmiga xayawaanka 'Excel spre ads oo aad kaga shaqeysid saacado si loo shaandheeyo loona abaabulo way dhammaadeen. Samaynta cilmi-baarista ereyga muhiimka ah hadda way fududahay mahadnaqa Clever Ads aaladda qorsheeyaha muhiimka ah Abaabulaan liistadaada muhiimka ah, isku dar, kala qaybi ama si toos ah uga buuxi aaladdayada. Bilaash. Ma daabac yar. Ha nixin, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno!
SEO iyo Suuq DHAQANKA BEST
Iska bilaabay iyo caawimo dadka aad ka heli
Tayadoodii aad ololaha PPC (pay-per-click) iyo kor loogu qaado aad ROI (Return Of Investment) iyo iibka bar ah keywords la xiriira macaamiisha aad kor u eegay iyo in mar hore si fiican u shaqeeyaan tartamaya. Ha ka maqnaan fursad hal marka performing aad cilmi keyword.
Clever Ads waxaan sidoo kale ku siineynaa macluumaad aan eex laheyn adiga oo keywords ka helaya ilo dhowr xog ah, mana ahan kaliya Google. Xogta Qorshaha Keyword Google badiyaa wuu qalloocan yahay, waxaanna soo saarnay qalabkeena abuurka erayga muhiimka ah si aad u sameyn karto cilmi baarista ereyga oo wanaagsan oo aad go'aano caqli gal ah ugu gaarto istiraatiijiyaddaada lacag-bixinta.
Bilow advertising isla markiiba
Clever Ads Xariifka ah ma maamuli kartid oo keliya keywords keywords iyo liistada keyword-ka hal meel taas oo xitaa ka dhigeysa mid sahlan oo habboon! Waxaad sidoo kale ku shubi kartaa iyaga Google Ads iyo kooxaha ad xayeysiiska si toos ah Clever Ads ah - dhammaantood hal meel! Waqtigu waa lacag waxaanan kaa rabnaa inaad labadaba kaydiso adoo adeegsanaya aaladdayada keyword-ka-goosadka ah.
Waa in-sameeyo ayna keyword
Xusuusnow in SEO fiican tip dhaqanka waa in aad xilliyo hubiso waxqabadka keywords si aad u qabsadaan si ay horumar, keywords stop in ay yihiin filayey sababtoo ah ma xiisaysaa ganacsigaaga, iyo tijaabin keywords cusub in uu kordhin karaa qaab aad ololaha. Markasta isha ku hay on isbeddellada keyword! imtixaanka keyword waa furaha iyo waxaan noqon doonaa hubi inaad idin xusuusiyo inaad cusboonaysiiso keywords aad si looga fogaado in lacag la qarashgareeyo inaysan muhiim ahayn on keywords laga filayey. Iyada oo aynu qorsheeyaha keyword ma seegi doonaa wax.
Ku soo dhawow mustaqbalka cilmi keyword iyo sax SEO
Khibradayada aan u leenahay abuurista iyo hagaajinta Google Ads in ka badan 150,000 shirkadood ayaa naga caawinaysa inaan ogaanno waxa run ahaantii muhiim kuu ah adiga marka aad dooranayso ereyo muhiim ah oo ku saabsan ganacsigaaga. Waan ognahay waxaad u baahan tahay! Iyadoo Clever Ads Qorsheeyaha keyword, cilmi-keyword noqon doonaa inta dheereysa oo sahlan, oo aad had iyo jeer iman karo dib u update iyo maarayn liiska aad keyword. SEO-gaagu wuxuu la kulmi doonaa horumar, iyo sidoo kale yoolalkaaga ganacsi.
Waxaa intaa sii dheer, waxaan dooneynaa inaad wax ku barato nidaamka, iyo Premier Premier Partners, waxaan dib u helnay dhabarkaaga waxaanan kuu balan qaadaynaa inaad sida ugu badan uga faa'iideysan doonto khibradeena. Kaliya maheli doontid eray furaha iyo aaladda SEO, laakiin waxaad lammaane ku noqon doontaa dembiga, oo aan ku siin doonin oo keliya ereyada muhiimka ah ee aad raadineysay, laakiin sidoo kale ilaha iyo macluumaadka aad u baahan tahay si aad keligaa u noqoto Google Ads ah. Ganacsigaaga ayaa ogaan doona faraqa!
All-in-mid qorsheeyaha keyword
Samee cilmi-baarista ereygaaga bilow ilaa dhammaad adigoon ka tagin Clever Ads dashboard-kaaga Waa wax fudud sida tan! Laga soo bilaabo gelitaanka ereyga muhiimka ah ama URL (u basaasidda ereyada muhiimka ah ee tartamayaashaada khiyaano ma ahan! Waa khiyaamo kale!) In lagu daro soo jeedinta ereyada muhiimka ah ee aad dooratay ololahaaga Google Ads Dhammaantood hal meel ayey ka wada yimaadeen, iyadoon loo baahnayn in la beddelo aaladda ama xakamaynta darbiyada. Waana bilaash! Adiga ayaa go’aansanaya!
Si wadajir ah inaan ka awood
Isticmaalidda Clever Ads Xariifka ah oo ay weheliyaan qalabkeenna kale, oo aad ka heli karto boggayaga, waxay sare u qaadi doontaa Google Ads waxayna sare u qaadi doontaa dadaalkaaga iyo miisaaniyaddaada. Iibintaada iyo natiijooyinkaagu si aad ah ayey u horumarsan doonaan ... Maxaad u hagaajineysaa kelmadahaaga muhiimka ah markii aad sidoo kale dib u habayn ku samayn karto ololayaasha oo dhan iyadoo la socota Google Ads Audit bilaashka ah ee abuuraya xayeysiisyo cajaa'ib leh isla markaana Google Ads ololeyaasha cusub ee Google Ads dhowr guji oo keliya Maamul dhammaan Google Ads hal meel ah oo noqo mid aan laga horjoogsan karin Clever Ads . Qalabkayaga kale waxaad ka heli doontaa oo keliya xisaabinta iyo eraybixiyaha muhiimka ah, laakiin sidoo kale Abuuraha Ololaha, Abuuraha Banner ee ololahaaga bandhigga, barnaamij moobiil ah oo aad ka daawan karto oo aad ku falanqeyn karto dhammaan miisaankaaga, iyo isku dhafka kala duwan ee qalabka sida Slack , Microsoft Teams ama Google Chat . Dhammaantood soo hel oo ka dhig ololeyaashaada xayeysiiska Google mid aan la joojin karin!
Waxaan kaa codsan doonaa inaad saxeexdo koontadaada Google Ads si aad u abuurto liiskaaga ereyada muhiimka ah, sidan ayaad marwalba u noqon doontaa billow inaad ku soo noqoto oo aad maamusho liisaskaaga cilmi-baarista erayga muhiimka ah. Waxaan u tixgelineynaa asturnaanta xogta si dhab ah waxaanan aruurineynaa waxaan u baahan nahay si aan kuu siino khibrada ugu fiican ee suurtogalka ah.